Yakanakisa Casement Window Mugadziri uye Fekitori | Medo
MEDO inopa yakawanda aruminiyamu casement hwindo masisitimu, anosanganisira: outsiwng casement hwindo, awning hwindo, kurereka / hopper hwindo, kusona yekutsiva hwindo, kurereka uye kutendeuka hwindo, rakagadziriswa hwindo, pikicha fafitera, padivi-yakaturika hwindo, keteni madziro hwindo etc.
Ese ari maviri emawoko uye emagetsi shanduro aripo. Stainless simbi nhunzi mambure uye yakavanzwa nhunzi pajira riya anowanikwa kusangana akasiyana vatengi 'zvido. Chii chimwezve, MEDO inopa yakasarudzika mawindo dhizaini ekukusiyanisa iwe kubva kune vamwe, semuenzaniso, kaviri inswing casement hwindo, 3 mu1 hwindo, hombe yakafanana hwindo etc.
Window yakavhurika nzira
Door rakavhurika nzira
Kugadzikana kwepamusoro • Kushanda Kwakanyanya • Kukwidziridzwa Kwakakwirira • Kushanda Kwakaderera • Kuwedzera Kukosha Kwekupinda-Mahara Kuwana • Kudhura Kwekugadzirisa Mutengo.
Thermal Break, yakawanda-mhango dhizaini, yakavanda drainage
Yakanakisa kudziya kwekushisa nehuremu hwekupisa, hombe yakawanda-mhango yekupisa yekupwanya tambo, uye gobvu rakavharika girazi. Yakaderera stock isina mari kuyerera kumanikidza ine yakanyanyisa profiles. Diversified chigadzirwa renji inogonesa nzvimbo dzese uye zvinoitika kuwana zvigadzirwa zvaro zvinokodzera kusangana nezvinodiwa zvakasiyana pamaitiro uye mashandiro. Zvinhu zvine hunyanzvi zvakadai sehwindo-musuwo uye mawindo maviri ekutswinyira nezvimwe zvinogona kupfuura zvaunotarisira kuzadzisa zvaunoda zvaungatomboona, uye nekudaro kutungamira maitiro emusika.
lnjection tekinoroji, yakakwira yekuisa chisimbiso kuita
Kona yekodhi yeglue jekiseni
Kumusoro kwemhepo kuomarara
Kumusoro kwemvura kuomesa
Yakazara nhevedzano inoshandisa kona glue jekiseni maitiro ekuwana akakwirira akabatana simba. Yakawanda mullion yekubatanidza yekuisa chisimbiso accessories uye yakavanda drainage zvakanyanya kuvandudza mvura kuomarara. Chii zvakare, premium EPDM gaskets yakawedzera kumesa kwemhepo uye kuomesa kwemvura.
Kugadzira kona kona inodzivirira, yakakwira inopenya simbi isina simbi flynet
Kugadzira kona kona
Casement musuwo usina kuvharirwa wepasi furemu unopa chipingaidzo-chisina kuwana. Stainless simbi flynet uye yakanyanyisa kutenderera yakavanzwa flymesh inowanikwa kusangana nezvinodiwa zvakasiyana pane nhunzi mesh basa nemaonero. Yakagadzirwa kona yekona inodzivirira yeinoshambadza hwindo inopa kwete chete yakanaka dhizaini asi zvakare yekuwedzera kuchengetedzeka kudzivirira inopinza kona.
Dual-color profile, zvinoreva kuti chimiro chemukati uye yekunze chimiro indifferentcolors, inogona kunyatso kuenderana nemukati dhizaini uye nekunze kwekuvaka maonero. Pry-nemishonga yekuvharira poindi uye muchengeti zvinopa kuwedzera uye kunatsiridza mhepo mutoro kurwisa mashandiro ehabetetter mweya kuomarara uye kuomesa kwemvura. inopa hunyanzvi hwehupenyu hwehupenyu nechitarisiko chidiki, mitsara isina kutsetseka, uye kushanda kwakanyarara.Vashandisi vanogona kugadzikana nekuchengetedzwa kwewindow kunyangwe mune yakaipa mamiriro ekunze nekutadza kwakachengeteka mudziyo.
MDPC100A Kunze kwewindo
MDPC100A110 Kunze kwewindo
(inoenderana furemu bhandi + inogoneka inodzivirira fenzi)
MDPC100A120 Kunze kwewindo
Patent dhizaini, mortise uye tenon tech, yakapfuura yakavanzwa drainage
Mortise uye tenon tech
Yakapfuura yakavanda drainage
Yakanakisa kudziya kwekushisa nehuremu hwekupisa, hombe yakawanda-mhango yekupisa yekupwanya tambo, uye gobvu rakavharika girazi. Chekutanga dhizaini dhizaini, yakavakirwa-mugeraji gwara, inowedzerwa kusimba kwemvura. Kuomeswa kwemvura uye kupokana nemhepo kunovandudzwa nekufa uye tenon yakabatana mullion. Multistep-nhatu-yakavhara chisimbiso uye yakavanzika dhizaini dhizaini yemvura iri nani kuomarara.
Yakavhurika chengetedzo fenzi, 45 ° yakasanganiswa yakasanganiswa girazi bead
Yakavhurika chengetedzo fenzi
45 ° yakasangana yakabatana girazi bead
Iyo isina-isina-shanduko furemu zvakanyanya inovandudza kugadzirwa kwekuita. Rinovhurika chengetedzo fenzi haisi kungo chengetedza kuchengetedzeka chete asiwo inoita kuti kutiza kuve nyore kana paine njodzi. Yakagadziriswa bhandi uye furemu ne45 ° kona yekubatana inopa yakashambidzika uye yakanaka maonero.
Kugadzira kona mudziviriri, Glue jekiseni tekinoroji, Inovandudza kona yekona
Glue jekiseni tekinoroji
Inovandudza kona yekona
Premium composite EPDM gaskets anoshandiswa kugadzirisa kuomarara kwemhepo uye kuomesa kwemvura. Kugadzira kona kona inodzivirira yeiyo inswing hwindo inopa kwete chete yakanaka dhizaini asi zvakare yakawedzera chengetedzo yekudzivirira kona yakapinza. Yakazara nhevedzano inoshandisa kona glue jekiseni maitiro ekuwana akakwirira akabatana simba. Innovative kona yekoramu dhizaini inoita yekona yekubatana yakachengeteka uye yakanaka.
Dual-color profile, zvinoreva kuti chimiro chemukati uye chimiro chekunze mumarudzi akasiyana, zvinogona kuenderana nemukati dhizaini uye yekunze chivakwa maonero. Pry-inodzivirira yekukiya poindi uye muchengeti anopa yakawedzera kuchengetedzeka uye inovandudza mhepo mutoro yekumira kuita kweiri nani kumesa mweya uye kusimba kwemvura. Pasina mubato inopa yakasununguka yekugara chiitiko neimalist chitarisiko, akatsetseka dhizaini dhizaini, uye yakanyarara mashandiro. Vashandisi vanogona kuzorora nekuchengetedzwa kwewindo kunyangwe mune yakashata mamiriro ekunze nekutadza chakachengeteka mudziyo. Hinge yakasimbiswa nejoinhi yakasimbiswa inoita kuti windows dzigadzikane, dzigare nekuchengeteka.
Kuchenesa hwindo + Kuongorora flynet
Window yekunze + Inocheka flynet
Yakanakisa kudziya kwekushisa nehuremu hwekupwanya, hombe yakawanda-mhango yekupwanya mbichana, uye gobvu rakavharika girazi. Chekutanga dhizaini dhizaini, yakavakirwa-mugeraji gwara, inowedzerwa kusimba kwemvura. Kuomeswa kwemvura uye kupokana nemhepo kunovandudzwa nekufa uye tenon yakabatana mullion. Multistep-nhatu-yakavhara chisimbiso uye yakavanzika dhizaini dhizaini yemvura iri nani kuomarara.
Yakavhurika chengetedzo fenzi, 45 ° yakasanganiswa yakasanganiswa girazi beaddrainage
Premium composite EPDM gaskets anoshandiswa kugadzirisa kuomarara kwemhepo uye kuomesa kwemvura. Kugadzira kona kona inodzivirira yeiyo inswing hwindo inopa kwete chete yakanaka dhizaini asi zvakare yakawedzera chengetedzo yekudzivirira kona yakapinza. Yakazara nhevedzano inoshandisa kona yeglue jekiseni nzira yekuwana yakakwira simba rekubatana. Innovative kona yekoramu dhizaini inoita yekona yekubatana yakachengeteka uye yakanaka.
MDPC120A Kaviri inswing hwindo
Chitarisiko chinokatyamadza ndiyo yekutanga pfungwa yainopa! Yakasarudzika uye patent dhizaini dhizaini, yakavhurika kaviri yekuvhura, yakavharika flynet, yakatarisana furemu uye bhandi, mutauro wekugadzira mushoma, yakapinda chisimbiso chakati wandei, zvakavanzika dhizaini, patent yekuvhura nzira ...... Kunze kweizvozvo, iwe chengeta.
chimiro chekugadzira uye dhizaini, saizi hombe, zvisimbiso zvishanu
Yakanakisa kudziya kwekushisa nehuremu hwekupisa, hombe yakawanda-mhango yekupisa yekupwanya tambo, uye gobvu rakavharika girazi. Inovhenekera mullion uye girazi bead dhizaini inosanganiswa neakaenderana sash uye furemu inopa zvakanaka yakaenzana yakatetepa tarisiro ine akatsetseka dhizaini dhizaini. 5 zvisimbiso zvine premium composite EPDM gaskets zvakanyanya zvakawedzera kusimba kwemvura uye kuomesa kwemhepo.
45 ° yemubatanidzwa girazi beaddrainage, Yakavanzika drainage
Yakagadziriswa bhandi uye furemu ne45 ° kona yekubatana inopa yakashambidzika uye yakanaka maonero. Yakawanda mullion joint chisimbiso zvishongedzo uye yakavanzwa.
Kuvhura kwemukati kwemukati, tekinoroji yakavanzwa tekinoroji, feni yeinowanikwa
Kuvhura kwemukati kaviri
Kaviri nzira yekuvhura yekuvhura inokurudzirwa kwazvo kumabasa epamusoro ekushanda nekuchenesa. Yakavanzika nhunzi mesh inopa inoshamisa chitarisiko uye yakanakisa zvakasikwa mwenje.
Yakagadzika shinda fan
Pry-inodzivirira yekukiya poindi uye muchengeti anopa yakawedzera kuchengetedzeka uye inovandudza mhepo mutoro yekumira kuita kweiri nani kumesa mweya uye kusimba kwemvura. Pasina mubato inopa yakasununguka yekugara chiitiko neimalist chitarisiko, akatsetseka dhizaini dhizaini, uye yakanyarara mashandiro.
- 10-gore garandi yehardware, inova iyo chemhando yepamusoro muindasitiri.
- Medo brand Hardware, Germany mhando Hardware uye US brand hari iri inowanikwa.
- Mhando dzakasiyana dzekubata dziripo.
- Pasina mubato inopa mashoma kutarisa.
- Yekugadzirisa sevhisi inogamuchirwa.
ChiBulgaria chiratidzo chepamusoro chengetedzo yekukiya system
- Strick kutenderera bvunzo
AlI yedu Hardware yapfuura yakaoma yakaoma kutenderera bvunzo iyo yakati wandei yakakwira kupfuura yeindasitiri standard.
- Unqiue yekukiya system
Unqiue yekukiya systemprovides yekuwedzera kuchengetedzeka.
- Ruzivo rwepamusoro rwekurapa
Nemaitiro epamusoro ekurapwa, kunyangwe makomputa emukati anoratidza akanakisa mune ese maonero uye anti-ngura.
Kona yakachengetedzwa yevana kuchengetedzeka
Gaskets edu akagadzirwa kubva kunze kwenyika premium mbishi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kuita mukati Kuisa chisimbiso, kusagadzikana kwemamiriro ekunze uye humbowo hwekukwegura.
Patent system dhizaini
Inotora 35.3mm yakawanda-mhango yekupisa kupisa ubvise, 27A isina mhango uye yakapetwa 12A isina girazi kumisikidzwa, iyo inogona kusangana nemafuta kuputira mashandiro enzvimbo inotonhora zvakanyanya apo uchiona yakakwirira kurira kuita kwe36db.
Iko kushandiswa kweakatsika akawanda-chiteshi zvisimbiso uye yakavanzika drainage dhizaini dhizaini simbisa chigadzirwa chakanakisa kuita.
MEDO mashoma windows uye madhoo - A New Home Maitiro
MEDO masisitimu ipa maonero akawedzeredzwa ane mafuremu akatetepa uye girazi hombe
Kwakanaka zvesimba zvakawanikwa neicho chaicho kusanganiswa kwemagirazi, profiles, Hardware uye gaskets zvinogona kukupa iwe yakachengeteka uye yakagadzikana yekugara nharaunda
Zvadaro: Bi Kupeta Sisitimu